Dhuxul, Jamac Shabeel iyo indho-indho risiqa allaa baxshee quulwadeynta joojiya by Abdi Mustafe
Dhuxul, Jamac Shabeel iyo indho-indho risiqa allaa baxshee quulwadeynta joojiya by Abdi Mustafe 0 July 11, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 441
Dhuxul, Jamac Shabeel iyo indho-indho risiqa allaa baxshee quulwadeynta joojiya by Abdi Mustafe Dhuxul wuxuu
jeclaystay in uu caan noqdo oo warbaahintauu dadka iska baro. Dhuxul marka dadku ku qoslaayo wuxuu u haystaa inay la qoslayaan.Fool xumida Dhuxul ku hayo madaxweynaha waa mid dad aan Silaanyo ka naxayni soo farayaan in Dhuxul kola yidhaa fadhiiso kola istaag. Wuxuu maanta warbaahinta ka yidhi shicibku dowlad bay doorteen oo uuga mas-uula dalka. Waa runtii laakiin 5 sano ayay ahayd oo wey dhamaatay Shicib kuna
raali kama aha xukuumad aan loo codeyni in ay sii fadhido. Dhuxul damiir xumidiisa Xirsi oo is qarinaya ayuu af-hayeen u noqdaa marka la weydiiyo wuxuu uugu hadlayana wuu arbush maa oo ma jawaabi garto. Jamac Shabeel isagu
isna wuxuu noqday af-hayeenka Muse Biixi oo waa kaa Muse soo diray ee ku yidhi ada dinjir ahaan jiray ee u jawaab Muumin Seed gudoomiye ku xigeenka Waddani. Jaamac isaga cidi wax ka qori mayso oo waa nin Muse ku
shaqeysto oon Kulmiye na waxba ka ahayn meel loo socdana aan garanayn.
CV giisu yahay Taxiile Hargiesa iyo Berbera ba ka shaqeyn jiray oo nasiib kiisa markii beeshiisa cid laga waayay lagu daray guurtida ayaa ka dhigan baqashii fardaha la daaqday ee faraska is mooday. Indho-indho wer-wer kiisa uugu weyni waxa weeye in aannu taxigii ku noqon oo uu fadhiga ku qaato mushaharka guurtida oo uu ka baqayo in dhawaan la kala diro. Guurtida waxa inagaga filan af-hayeen kooda oo indo-indho ah.
soo xooei oo sadexduba waa rakaabka xun ee Silaanyo u guulwadeeya een aamin sanayn in risiqa ilaahay baxsho ee moodaya hadii Silaanyo meesha ka baxo in risiqoodu ku goa'yo. Once Guulwade always Guulwade weligoodna
dowladii timaadaba guulwada yaal uun bay u ahaana yaan ileyn xirfad kale garan maayaan e.
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items Somali Xalkeedi Nabada iyo dawladnimada Geeska Ma Garan la'a ee Way garab Maraysaa .!!! W/Q Mohamed Abdirahman